China Opens Up Oil and Gas Exploration, Production for Foreign, Domestic Firms | Myanmar Business Today
Home Business Regional China Opens Up Oil and Gas Exploration, Production for Foreign, Domestic Firms
Workers are seen near pumpjacks ataChina National Petroleum Corp (CNPC) oil field in Bayingol, Xinjiang Uighur Autonomous Region, China, August 7, 2019.
“Vitalizing the industry by diversifying the participants, including foreign and private investors, is the focus of that reform.”
China now imports 70 percent of the crude oil it refines and nearly half its natural gas consumption, and state firms face an uphill battle boosting reserves and production outside the country amid growing geopolitical risks.
Previously, international companies could enter the industry only via joint ventures or cooperation with Chinese firms, mainly state-owned majors such as China National Petroleum Company (CNPC), China Petrochemical Corp. (Sinopec) or their listed vehicles.
“The policy may come too late… as the sweet spots are all taken,” saidaBeijing-based industry adviser toaEuropean oil and gas firm.
“This is quite an ice-breaker. It will take time but it could bring about the long-desired competitive environment that has made the oil and gas industry so efficient in North America,” said an executive withaHong Kong-listed oilfield service provider.
တရုတ်နိုင်ငံသည် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် နိုင်ငံတွင်းတွင် ရေနံနှင့် ဓာတ်ငွေ့ ရှာဖွေထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ပြည်ပကုမ္ပဏီများအား ခွင့်ပြုပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ကဏ္ဍကိုလည်း နိုင်ငံပိုင်း စွမ်းအင်လုပ်ငန်းကြီးများအပြင် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများကိုလည်း ဖွင့်ပေးလိုက်သည်။
ကာလရှည်ကြာစွာ စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော ထိုကဲ့သို့ တံခါးဖွင့်လိုက်ခြင်းတွင် midstream ပိုက်လိုင်းလုပ်ငန်းများကိုလည်း ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။ သို့သော် ကျွမ်းကျင်သူများကတော့ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဟိုက်ဒရိုကာဘွန် အရင်းအမြစ်များ၏ အရည်အသွေး မကောင်းသောကြောင့် နိုင်ငံတကာ ရေနံတွင်းလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ချက်ချင်း စိတ်ဝင်စားမှု ရှိနိုင်ချေ နည်းကြောင်း သုံးသပ်ကြသည်။
ပိုင်ဆိုင်မှု ယွမ် သန်း ၃၀၀ (အမေရကိန်ဒေါ်လာ ၄၃ သန်း) ရှိပြီး တရုတ်နိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် မေလ ၁ ရက်နေ့မှစကာ ‌ရေနံနှင့် ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သဘာဝအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။
ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်လည်း ထိုကဲ့သို့သော သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီရမည်ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ပြည်တွင်းတွင် သန့်စင်ထုတ်လုပ်နေသည့် ရေနံစိမ်းများ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ပြည်ပမှ တင်သွင်းနေရခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းတွင် သုံးစွဲနေသည့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့၏ ထက်ဝက်ခန့်ကိုလည်း ပြည်ပမှ တင်သွင်းနေသည်။ ယင်းအပြင် နိုင်ငံပိုင် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အရံလောင်စာများ သိုလှောင်ရန် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေရသည်။
SOURCEChen Aizhu and Muyu Xu (Reuters)
Previous article‘Toxic’ Culture and Troubling Incidents at SoftBank’s Jewel in India